unyaka 1 2 edlule #1302 by iainmac123
noma yiliphi ithuba lokuthi ungangezela ama-winglet / sharklets amabili (uphuzu we-up and down wing) kuphakheji le-737 noma wenze i-737 max. Kungenza ngempela lo mzwa ube ngcono kakhulu!
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: jervan, Sea7212
ngenyanga ngonyaka 1 1 edlule #1320 by i-stetod
Engxoxweni engangiyenayo nge-iFly mayelana nokuguqula i-B737 NG kulokhu, babalekele ukuthi ku-2020 bahlela ukwethula i-B737 MAX.
ngenyanga ngonyaka 1 1 edlule #1322 by matwin
ingabe leyo payware?
ngenyanga ngonyaka 1 1 edlule #1323 by i-stetod
Yebo IFly iyakhokhwa, kodwa kufanelekile. Njengoba ngibe yi-Naval Aviator, ngahamba nge-P-3 no-C-9 Variants futhi ngizosho ukuthi i-iFly payware inikeza isipiliyoni esinembile kakhulu sokuqala okubandayo kanye nezici zezindiza. Kuhle kakhulu imali ukuze ube nokuhlangenwe nakho okunengqondo.
ngenyanga ngonyaka 1 1 edlule #1347 by Gh0stRider203
Uma ucabanga ukuthi iFly ihle .... udinga ukuzama i-PMDG Kuvunywa ukuthi akusizi ezishibhile ... kodwa kuwufanele wonke amaphesenti! I-737 kuphela, i-747 ne-777 I fly yi-PMDG
Isikhathi ukudala page: 0.190 imizuzwana